Feejigelinta matoorrada soosaarka iyo iibinta warshadaha gariirka gariirka warshadaha
Matoorrada gariirka warshadaha ee soosaarka iyo iibinta
Feejigalinta matoorrada wax soosaarka iyo iibinta
mootada gariirka weyn, matoorka gariirka warshadaha, qiimaha matoorka gariirka wanaagsan, matoorka gariirka awooda badan, 110v gariirka mootada & 240V, matoorrada gariirka korantada, mootada birqaya birta, matoorrada korontada loo isticmaalo qorshooyinka miiska birqaya birqaya, gariirka mootada hopper.
Waxaan nahay Shirkad Soo-saare Wershadeyn caalami ah oo soo saareysa dhoofinta Shiinaha kana socota Shiinaha.
Matoorka Vibration Motors
Gawaari yar oo weyn ama weyn oo ruxaya mootada, 220v ama 380v ama mooto kale oo ah gariir, waa inaad nala socodsiisaa waxaanan ku siin doonnaa kan ugu wanaagsan.
Soo hel faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan matoorkeena
Soosaaraha Vibratory iyo Vibrating Mobiillada Mashiinnada
Qeexitaankeena gawaarida gariirku way dhameystiran yihiin, waxay ku habboon yihiin gelinta American 110V, Europe 220V, saameyn wanaagsan oo hawlgal ah waana mudan tahay in lagugula taliyo! Mashiinka gariirka wuxuu leeyahay codsiyo kala duwan. Waxay xallineysaa dhibaatada kala soocista maaddada shirkaddayada waana mid aad u faa'iido badan.
Codsi ballaaran ayaa u shaqeynaya warshadaha
Mashiinka korantada la taaban karo ee korantada ku dhaqdhaqaaqaya qalabka korantada ku shaqeeya waa shey caadi ah oo loogu talagalay mashiinno kala geddisan, suchas feeder feeder, screen vibrating, conveyorvec oscillating, mashiinka ruxida gariirka, miiska gariirka gariirka iyo wixii la mid ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa korantada, qalabka dhismaha, dhuxusha, macdanta, bir, warshadaha kiimikada, warshadaha nalka, warshadaha iyo warshadaha kale.
Xulashada Fidinta Vaizo ee noocyada badan ee dalabyada
Gawaarida kacsan ee toosan waa rakibida set of hagaajin karo eccentric block labada gees ee biraha rotor-ka, iyo isjiidjiidka heerka korantada ee bartamaha centrifugal ee laga keenay xawaare xawaare sare si loo helo xoog xiiso leh. Qeybaha mowqifyada kacsan ee tooska ah waxay xambaaraan heerkulka kor u kaca qulqulka dheer ee joogtada ah ayaa si hufan loo xakamayn karaa, si matoorka gariirka toosan uu u leeyahay nolol qaas ah.
Cabbirka loo yaqaan 'Compact cabbirku' wuxuu ku fiican yahay inuu la jaan qaado inta badan warshadaha.
Mashiinka iftiinka miisaanka, mugga yar, dhismaha fudud, rakibaadda ku habboon iyo dayactirka. Dhisme buuxa oo buuxa, oo lagu dabaqay xaalad kasta oo shaqeyneysa oo aan lahayn shuruudo u-eg-qarax.
Qaab adag oo xirxiran si loo hubiyo nabdoonaanta inta lagu guda jiro safarka.
kiisaska alwaax-ka-goosad ama codsi macmiil. Waa ku habboon tahay in la beddelo xoogga gariirka iyada oo la hagaajinayo isugeynta xagal-istagga dhinacyada alwaaxda.
Matoorrada dhaqaaqa Waxaan siineynaa
Mootooyinka gariirka yaryar ee waaweyn, matoorka gariirka warshadaha ee sedexda waji, mootada gariirka xoogga leh oo leh faras weyn, hal wajiga oo gariirka mootada loogu talagalay guriga ama isticmaalka arjiga nalka. mashiinka gariirka xawaaraha isbedbeddela, matoorka birqaya ee miiska birqaya, gariirka mootada ee biraha
Jiidashada dhaqaaqa YZU
Mooryaan gariirka warshadaha oo leh qiimo wanaagsan
Feejignaanta gawaarida MVE
Mashiinka gariirka MVE Caddaynta Caddaynta Biyaha
Feejignaanta matoorka YZS
Mashiinka gariirka weyn ee xoogan
Nooca gawaarida Mini Nooca
Mini gariirka mootada gariiriyeyaasha gudaha leh Thermosensors
Mashiinka gariirka YBZ
Cadeyn Caddaynta saddex-waji oo aslichronous gariir gariir ah
Qalabka gariirka DC Ilaa AC
24V 12v dv matoor gariirka buraash la'aan leh kontoroolka iibka
Firfircoonaanta iyo Wejiga Xiran Gawaarida dhaqaaqa
Gawaarida yar ee DC Vibration Motors Yaryar sharooyinka si buuxda uxiran ama badh
Xulashada matoorrada Vibratory
Waxaan kuu soo diri karnaa qeexitaan dheeri ah oo birqaya haddii aan dib u eegnay su'aalahaaga. Qiimaha ugu fiican ayaa la soo diri doonaa isla waqtigaas. Matoorka Vibration Motors loo istcimaalo qalabka wax lagu farsameeyo sida gariir quudiyeyaasha, conveyors, gariir miisas, shaashad, shaashad boorso badan, shaashad boorso badan iyo waxyaabo intaa ka sii badan
La soco cusbooneysiinta
Ka hel cusbooneysiinta iyo wararka tooska ah ee tooska ah ee kooxdayada. Si fudud ugu qor emaylkaaga hoosta:
Sogears waxay bixisaa ku dhawaad ​​dhammaan alaabada mowjadaha korontada ku shaqeeya ee tamarta ku habboon warshadaha.